Meteor inotitaridza ruzivo rwemamiriro ekunze mune icon uye mune mamiriro bar IPhone nhau
Imwe yemabhenefiti iyo Jailbreak inotipa ndeyekuti isu tinokwanisa kugadzirisa yedu kifaa sezvatinoda, zviripachena mukati memipimo iyo Jailbreak inotipa. Kana isu tiine Apple Watch, kuti tikurumidze kutarisa nguva yatinofanira kungoisa ruoko kuti rione pachiratidziro chewatchwatch sekureba kwatakamboita imwe yematambudziko mudanho ratakasarudza kutiratidza nguva. Zvikasadaro isu tinofanirwa kutora nhare, tarisa mamiriro ekunze uye pfuurira kuona mamiriro ekunze tembiricha munzvimbo yedu.
Nekuda kweJailbreak, tinogona kugadzira imwe yeMeteo tweak iyo inotibvumidza kushandisa iyo Weather application icon, kutiratidza iyo yazvino tembiricha uye mamiriro ekunze, kana kune makore, kwakajeka, kuchinaya ... Asi zvakare ino yakanakisa tweak zvakare inotibvumidza isu kuisa ruzivo urwu kumusoro kweiyo status bar, zvekuti hazvidi kuti uzarure mudziyo kuti ukwanise kuona kunze kwekushisa uye mamiriro ezvakatipoteredza. Kana isu tinogona zvakare tarisa kunze nepahwindo kuti zvakaitwa sei hupenyu hwako hwese.
Meteor nekumisikidza inogadziridzwa yega yega maminetsi makumi matatu, asi isu tinogona kuwedzera kana kudzikisa iyo nguva zvinoenderana nezvatinoda, kunyangwe mune nyaya yekudzikamisa, zvinokanganisa bhatiri kushandiswa. Asi zvakare zvinotibvumidza kuti tishandure iyo nzvimbo yetembiricha muiyo status bar, kuruboshwe kana kurudyi. Ichi chishandiso inowanikwa pane BigBoss repo ye $ 1,99. Parizvino isu hatisi kunakidzwa neJailbreak kupfuura iOS 9.0.2, saka kana iwe uri mune yepamusoro vhezheni, haugone kuJailbreak zvakare, sezvo Apple ichingosaina iOS 9.2, kana kuisa, hongu, iyi tweak.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Meteor inotitaridza ruzivo rwemamiriro ekunze mune icon uye mubato renzvimbo
Microsoft inodhinda kushambadzira inoratidza kusakwana kweMacs